एनआईसी एशिया बैंकको दोस्रो त्रैमासिकमा वित्तीय नतिजा उत्साहजनक, मुनाफामा ३३ प्रतिशतको छलाङ::Daily Newspaper of Nepal
७ माघ २०७६, मंगलवार ११:१०
एनआईसी एशिया बैंकको दोस्रो त्रैमासिकमा वित्तीय नतिजा उत्साहजनक, मुनाफामा ३३ प्रतिशतको छलाङ
काठमाडौं / एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले चालु आ.व. २०७६/७७ को दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण आज सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरणका परिसूचकहरु अत्यन्त उत्साहजनक रहेको बैंकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ ।
बैंकले चालु आ.व.को दोस्रो त्रैमाससम्म वार्षिक विन्दुगत आधारमा ३६ प्रतिशत (रु. ७७ करोड) ले वृद्धि गरी रु. २ अर्ब ९० करोड सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकका नायव प्रमुख सूचना अधिकारी अर्जुन राज खनियाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार खुद मुनाफातर्फ वार्षिक विन्दुगत आधारमा ३३ प्रतिशत (रु. ५० करोड) को वृद्धि सहित रु. २ अर्ब १ करोड खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
गत वर्षको सोही अवधीको खुद मुनाफा रु. १ अर्ब ५१ करोड रहेको थियो ।
यस आ.व.को दोस्रो त्रैमाससम्ममा कर्जातर्फ रु. १५ अर्बले वृद्धि गरी रु. १६५ अर्ब र निक्षेप संकलनतर्फ रु. ६ अर्बले वृद्धि गरी रु. १८६ अर्ब पुर्‍याउन सफल भएको उनले बताए ।
बैंकले आफ्नो रणनीति अनुसार कर्जा लगानीलाई न्यून जोखिमका साना तथा मझौला कर्जा र रिटेल कर्जामा विविधिकरण गर्दै आएको छ । बैंकले कुल कर्जा लगानीको हाल ७२ प्रतिशत कर्जा यस्ता क्षेत्रमा गरेको छ । त्यसैगरी प्राथमिकता क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी पुर्ण रुपले पालना गरेको छ । विविधिकरणकै रणनीति अनुरुप बैंकको उच्चतम दस ग्राहकहरुको कुल कर्जा बैंकको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ, जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रको उत्कृष्ट मध्ये पर्दछ ।